Shirka Midowga Afrika oo ka furmaya Adis Ababa – XAMAR POST
Shirka Midowga Afrika oo ka furmaya Adis Ababa
By Mohamed Abdi On Feb 4, 2022
Shirkan ayaa la filayaa in maalin berri ee Sabtida oo ku beegan 5 bisha Feberary uu ka furmo magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya ee, iyadoo Hoggaameyaash Afrika ay halkaasi ku qulqulayaan.
Kulanka oo ah kii 35-aad ee ay Madaxda yeeshaan oo uu Guddoominayo Madaxweynaha Senegal ayaa waxaa looga hadli doonaa xaaladda Amni iyo kuwa siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday Afrika, arrimaha Binu aadanimada iyo xoojinta xiriirka ay qaaradda lala leedahay xulufadeeda Caalamka.
Shirka waxaa uu ku soo aadaya xilli dalal badan oo ka tirsan Afrika looga diyaar garoobayo Doorashada Madaxtooyadda, dalalkaasi ayaa waaxaa kamid ah Soomaaliya.
Wefdi ka socda Soomaaliya ayaana ka qeyb galaya shirka, kuwaasi oo ka warbixin doona xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha Doorashada dalka.
Sidoo kale waxyaabaha looga hadli doono shirka ayaa waxaa kamid ah xaaladda dalka Marti-gelinaya Shirka ee Itoobiya oo la daala dhacaya colaad muddo laba sano ah ka socota Gobolka Tigrey ee Waqooyiga dalkaasi, oo ay dowladda dagaal ka dhashay Doorasho ku dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo kuwa Fallaagada TPLF.
Dowladda Itoobiya ayaana shirkaan uga dhigan yahay guul diblumaasiyadeed, maadaama uu dalkaasi la daala dhacayo eedeymo iyo culusyo uga imaanayay Caalamka, kuwaasi oo ku aadana saameynta ka dhalatay dagaalka Tigrey.
MW Farmaajo oo u safray Adis Ababa
Taliska Booliiska Gobolka Nugaal oo faahfaahin ka bixiyay Rasaas laga maqlay Garawe.